वासिङ मेसिन किन्दै हुनुहुन्छ ?
यी विषयमा दिनुस् ध्यान
२०७८ कार्तिक, २६
काठमाडौं । जाडो होस् वा गर्मी । लुगा धुन सजिलोका लागि वासिङ मेसिन दैनिकीमा महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । कामकाजी र बलियो आर्थिक स्रोत भएकाहरूका लागि लुगा धुन र सुकाउन पछिल्लो समय नेपालमा पनि वासिङ मेसिन प्रयोग गर्ने उपभोक्ता बढ्दै गएका छन् । वासिङ मेसिन किन्नुअघि केही महत्वपूर्ण विषयबारे जानकारी राख्नु राम्रो हुन्छ ।
सामान्यतया वासिङ मेसिन ५ केजीदेखि २४ केजी तौलसम्मका बजारमा पाइने गर्छन् । यद्यपि हामीले आफ्नो परिवारको संख्याका आधारमा वासिङ मेसिनको साइज छानेर किन्नुपर्ने हुन्छ । यदि परिवार संख्याको आधारमा साइज भएन भने सानो वा ठूलो पर्न सक्ने डर हुन्छ । ३÷४ जनासम्म परिवार संख्या छ भने ६ केजी, ७ जनासम्म परिवार सदस्य भए ७ केजी र त्योभन्दा माथि परिवारको संख्या भए परिवारको आकारअनुसार आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बढी तौलका वासिङ मेसिन खरिद गर्न सकिन्छ ।
मेसिनको आकारअनुसार कति मात्रामा लुगा धुन सकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । पानीमा भिजेको कपडाको तौल बढी हुने भएकाले भिजेको कपडाभन्दा सुक्खा कपडाको तौल अन्दाज गरेर मेसिनमा राख्नुपर्दछ ।
ब्रान्ड, आकार र वासिङ मेसिनमा भएका विशेषताअनुसार यसको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपाली बजारमा सिजी, एलजी, सामसुङ, बाल्ट्रालगायत २६ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने वासिङ मेसिन उपलब्ध छन् । सेमिअटोमेटिक र अटोमेटिक गरी बजारमा दुई प्रकारका वासिङ मेसिन खरिद गर्न सकिन्छ । कपडा धुनुका साथै सुकाउनसमेत सहयोगी हुने भएकाले आजभोलि बजारमा उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा अटोमेटिक वासिङ मेसिन पर्ने गरेका छन् । यसले विद्युत् खपत पनि सेमिअटोमेटिकको भन्दा कम गर्दछ ।
घरको सुरक्षामा मार्बल : सजावट र टिकाउपनमा ढुक्क[२०७८ मंसिर, १०]
वासिङ मेसिन किन्दै हुनुहुन्छ ?[२०७८ कार्तिक, २६]
घरको बीमा सम्पत्ति सुरक्षा : जीवनभरलाई ढुक्क[२०७८ कार्तिक, २६]
मिठाईको पर्व तिहार : कोसेलीदेखि भान्सासम्मै हुन्छ खपत[२०७८ कार्तिक, १८]
झिलीमिली तिहार : माटाका पाला बनाउने चटारो[२०७८ कार्तिक, १६]